Reuters case encourages mass self-censorship about Rakhine conflict — Reuters အမှုသညျ ရခိုငျပဋိပက်ခနှငျ့ ပတျသတျပွီး အလှနျကွီးမားသညျ့ မိမိဘာသာဆငျဆာထိနျးခြုပျခွငျးကို အားပေး လကျြရှိနေ – Free Expression Myanmar
Jul 09, 2018 by Coordinator	in News သတငျး
Today’s decision byaYangon court to charge two journalists, Ko Wa Lone and Ko Kyaw Soe Oo, deeply undermines the right to freedom of expression in Myanmar.
“Almost every journalist in Myanmar self-censors on anything relating to Rakhine because of this Reuters case. Prosecuting – and persecuting – two investigative journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo for doing their job isanational shame intended only to stop any information coming out about what is really happening inside Myanmar’s many conflict areas.”
The Official Secrets Act was created by the British colonial government in 1923 to criminalise the sharing of almost any kind of information held by the government. Articles3and5criminalise people for sharing information about the government. The government can say any information is an official secret.
This law hides government corruption and wrongdoing by saying that the evidence is an official secret.
The British government knew the law violated freedom of expression and replaced their Official Secrets Act in 1989.
FEM urges the home ministry to withdraw the prosecution, and calls on the appointed trial judge to throw out the case.
(Zawgyi Font Version)
ဂျာနယ်လစ်များဖြစ်ကြသည့် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနှင့် တရားစွဲဆိုရန် ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှ ယနေ့ချမှတ်လိုက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာထုတ် ဖော်ရေးသားပြောဆိုခြင်း လူ့အခွင့်အရေးကို လေးနက်စွာ သေးသိမ်မှေးမှိန်စေပါသည်။
“Reuters အမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျာနယ်လစ်အယောက်တိုင်းနီးပါးဟာ ရခိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိမိဘာသာဆင်ဆာပိတ်ထိန်းချုပ် နေကြရပါတယ်။ စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းရေးသားတဲ့ သတင်းထောက်တွေဖြစ် ကြတဲ့ ကိုဝလုံး နဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ဦးကို သူတို့အလုပ် သူတို့လုပ်တဲ့အတွက် တရားစွဲဆိုတယ်ဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဋိပက္ခဒေသတွေအတွင်းမှာ ဘာတွေအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်း အချက်အလက်စီးဆင်းမှုကို ရပ်တန့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံနဲ့ချီ အရှက်ရစရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနီးပါးကို မျှဝေခြင်းအား ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေကို ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရမှ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ဖန်တီးပြဌာန်းခဲ့သည်။ ပုဒ်မ ၃ နှင့် ၅ သည် အစိုးရအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များမျှဝေသည့် လူများကို ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်သင့်စေသည်။ အစိုးရမှ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဟု ပြောဆိုနိုင်သည်။
အစိုးရ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း နှင့် မှားယွင်းစွာဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အား သိသာစေသည့် သက်သေများကို ယင်းဥပဒေမှ နိုင်ငံတော်လျို့ဝှက်ချက်ဟုပြောကာ ယင်းတို့၏ မကောင်းသောပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များအား ဖုံးကွယ်ပစ်လေ့ရှိသည်။
ဗြိတိသျှအစိုးရမှ ယင်းဥပဒေသည် လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အား ချိုးဖောက်နေသည်ကို သိမြင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေအားပြန်လည်ရေးဆွဲအစားထိုးခဲ့သည်။
လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မြန်မာ FEM မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအား တရားစွဲဆိုမှုကို ရုတ်သိမ်း ပေးရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး၊ တာဝန်ကျတရားသူကြီးအား အမှုကို အပြီးတိုင်ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ပါ သည်။
ဂြာနယျလဈမြားဖွဈကွသညျ့ ကိုဝလုံးနှငျ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့အား နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒနှေငျ့ တရားစှဲဆိုရနျ ရနျကုနျတိုငျးတရားရုံးမှ ယနခေ့မြှတျလိုကျသော ဆုံးဖွတျခကျြသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး လှတျလပျစှာထုတျ ဖျောရေးသားပွောဆိုခွငျး လူ့အခှငျ့အရေးကို လေးနကျစှာ သေးသိမျမှေးမှိနျစပေါသညျ။
“Reuters အမှုကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံရှိ ဂြာနယျလဈအယောကျတိုငျးနီးပါးဟာ ရခိုငျပဋိပက်ခဖွဈစဉျနဲ့ ပတျသတျပွီး မိမိဘာသာဆငျဆာပိတျထိနျးခြုပျ နကွေရပါတယျ။ စုံစမျးဖျောထုတျသတငျးရေးသားတဲ့ သတငျးထောကျတှဖွေဈ ကွတဲ့ ကိုဝလုံး နဲ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့နှဈဦးကို သူတို့အလုပျ သူတို့လုပျတဲ့အတှကျ တရားစှဲဆိုတယျဆိုတာဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပဋိပက်ခဒသေတှအေတှငျးမှာ ဘာတှအေမှနျတကယျဖွဈပကျြနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျး သတငျး အခကျြအလကျစီးဆငျးမှုကို ရပျတနျ့စဖေို့ရညျရှယျခကျြသာဖွဈပွီး၊ နိုငျငံနဲ့ခြီ အရှကျရစရာပဲ ဖွဈပါတယျ။”
အစိုးရထိနျးခြုပျထားသော သတငျးအခကျြအလကျအားလုံးနီးပါးကို မြှဝခွေငျးအား ရာဇဝတျပွဈဒဏျပေးရနျ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒကေို ဗွိတိသြှကိုလိုနီအစိုးရမှ ၁၉၂၃ ခုနှဈတှငျ ဖနျတီးပွဌာနျးခဲ့သညျ။ ပုဒျမ ၃ နှငျ့ ၅ သညျ အစိုးရအကွောငျး သတငျးအခကျြအလကျမြားမြှဝသေညျ့ လူမြားကို ရာဇဝတျပွဈဒဏျသငျ့စသေညျ။ အစိုးရမှ မညျသညျ့သတငျးအခကျြအလကျကိုမဆို နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြဟု ပွောဆိုနိုငျသညျ။
အစိုးရ၏ အကငျြ့ပကျြခွစားခွငျး နှငျ့ မှားယှငျးစှာဆောငျရှကျခွငျးတို့အား သိသာစသေညျ့ သကျသမြေားကို ယငျးဥပဒမှေ နိုငျငံတျောလြို့ဝှကျခကျြဟုပွောကာ ယငျးတို့၏ မကောငျးသောပွုမူဆောငျရှကျခကျြမြားအား ဖုံးကှယျပဈလရှေိ့သညျ။
ဗွိတိသြှအစိုးရမှ ယငျးဥပဒသေညျ လှတျလပျစှာရေးသားထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့အား ခြိုးဖောကျနသေညျကို သိမွငျခဲ့ပွီး၊ ၁၉၈၉ ခုနှဈတှငျ ဥပဒအေားပွနျလညျရေးဆှဲအစားထိုးခဲ့သညျ။
လှတျလပျသောထုတျဖျောပွောဆိုခွငျး မွနျမာ FEM မှ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနအား တရားစှဲဆိုမှုကို ရုတျသိမျး ပေးရနျတိုကျတှနျးလိုကျပွီး၊ တာဝနျကတြရားသူကွီးအား အမှုကို အပွီးတိုငျပယျဖကျြပေးရနျ တောငျးဆိုလိုကျပါ သညျ။
Tagged with: Conflict, National security အမြိုးသားလုံခွုံရေး, Official Secrets Act, Whistleblowers